Global Voices teny Malagasy » Ho Fahatsiarovana An’i Aleppo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Desambra 2017 14:45 GMT 1	 · Mpanoratra مرسيل شحوارو Nandika (en) i Lara AlMalakeh, imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Ny Tetezana - The Bridge
Sary avy amin'i Lens Young Halabi, mampiseho rindrina iray tamin'ny 2013 mitondra ny fehezanteny hoe ”velona isika ary mitoetra; mitoetra ho an'ny nofy isika”. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Ho an'ireo rehetra honina ao amin'ny toerana nialanay….
Efa nanao revolisiona teny izahay indray mandeha. Tsy nipetraka teny amin'ny manodidina teny mihitsy aho, fa mpitsidika, vahiny, miaraka amin'ireo fombafombako kely, toy ny miarahaba ny mpifanila trano eny amin'ny tohatra amin'ny maraina, ny fikarohako tsy ankijanona ireo vokatra izay matetika tsy namidy tao an-toerana, ny resaka, lava sy momba ny zavatra mibahana ao an-tsaina, niarahako tamin'ireo mpitondra fiarakaretsaka mba hanombanana ny fironany ara-politika sy ny fomba fijeriny ireo toeram-pisavana.
Mbola misy revolisiona any, ao Bustan Al Qasr. Any no hahitanao—raha tsy hoe efa nofafan'ireo Fatritran'olona izany—sarintsary kelinà miaramila sy olona be volombava miaraka aminà maritoa eo amboniny ary ny fehezanteny manao hoe: ”revolisiona iray hamaky loha maro.” Nanamarika ny fiandohan'ny revolisiona faharoanay izany, ny iray nanohitra ireo niezaka ny hanaisotra ny zonay tamin'ny herin'ny fitaovam-piadiana na ny fivavahana. Fa mety tsy fantatrao ny mikasika ny revolisiona maro nataonay teny, nolokoin'i Abu Maryam. Mety tsy ho henonao ny feonay toy ny itenenanay aminao hoe iza i Abu Maryam.
Manana revolisiona iray ao izahay. Ao amin'ny toerana fisavana “Karaj IlHajez” izay nidarohana ny sasany tamin'ireo namanay! Nanao fihetsiketsehana ry zareo mba ho fanokafana ilay toerana fisavana ho an'ny sivily.
Manana revolisiona iray ao izahay. Tao amin'ilay foibe ara-pahasalamana, nanao veloma ny martiora izahay, ny iray aorian'ny iray hafa, ary nanana resaka, tafatafa, namana, ratra tsy tambo isaina izahay.
Manana revolisiona iray ao izahay. Ao amin'ny fasana, manana namana izahay. Mustafa no akaiky ahy indrindra tamin'izy ireo. Nanangana fianarana iray tao izay nomena ny anarany izahay. Any koa izany. Nanome antony ho anay mba handroso hatrany ilay sekoly; nino izahay fa samy nandoa ny trosanay. Anareo ankehitriny ny fasan'i Mustafa sy ny fianarany. Raha mba mandalo azy ireo ianareo, karakarao am-pahamendrehana izy ireo, fa satria loharanom-pitiavana, fanomezana sy fanolorantena io lehilahy io. Ampahany tao anatin'ny vinany izahay, ary tsy nahomby.
Manana revolisiona iray ao izahay. Nanoratra teo amin'ny rindrina ny vahiny adaladala mpiady iray: ”Vita ny Franc-maçonnerie (fr)”. Matetika nihomehezanay ny tsipeliny diso. Ary rehefa nitranga ny fipoahan'ny Leishmania, ary nanao fampielezankevitra famendrahana (famafazana) ny sasany taminay, nanana ny grafitti manokana anay izahay izay niteny: ”Vita i Leshmania”. Izany no fomba nifankahazaranay, izany no fomba nitadiavanay vahaolana. Izany no antony hahitanareo ireo fianarana sy hopitalinay any ambanin'ny tany. Nifankahazatra tamin'ireo daroka baomba izahay. Niezaka ny hanohitra. Nanao revolisiona tao izahay….
Ilay Hopitalin'ny Maso! Ilay nanaovanay hetsi-panoherana ny Fitsarana Sharia hatrany hatrany. Teny, izay namonoan'ny ISIS ireo 35 taminay. Teny, izay nipoahan'ny hetsi-panoherana mba handroahana azy ireo. Teny, izay namonjàna ahy—mbola tsy mianiana—satria teny ihany koa no namotsorana ahy, satria manana revolisiona ao izahay.
Avadiho ho hopitaly io. Tsy ohatr'ireo hopitalintsika any ambany tany, fa iray ho an'ny olon-drehetra. Feno fanahy izay hikarakara ireo marary ilay toerana.
Aleppo taloha no toerana fialanay sasatra. Teny aho no matetika nandeha nihira; tena tia nihira, nitia, nanao sakafo ary nihinana ny zavatra rehetra ankoatra ny falafel tao amin'ny ”Tranon'ny Falafel” izahay, ireo mpampihorohoro ratsy saina.
Ho gaga amin'ireo vato mifanongoa ianareo. Tranon'ireo fianakaviana ireny, trano izay angamba, ny hany mba fananan-dry zareo. Voatery nandao izy ireo. Naka fotoana kely mba handrotsahana ranomaso ho fahatsiarovana ireo tsiahin-dry zareo.
Tsy ho fantatrareo izany. Nandao nandritra ny volana maromaro aho, saingy tsy nety zatra tamin'ny halehiben'ny fandravàna rehefa niverina. Izany no nanjo ny mpifanolo-bodirindrina taminao, noho izany tsy maninona ny mandrotsaka ranomaso maromaro.
Hahita, raha avelan-dry zareo, faty tsy tambo ho isaina ao ambanin'ny korontan-trano ianareo. Tsy ninianay ny hamela ny fatinay toy izany tsy misy fandevenana mendrika azy. Tsy hoe nanao antsirambina izahay, fa nikendry ny vondrona rehetra ireo fiaramanidina, ary lasa tsy afaka natao intsony ny nanetsika fiara nandritra ireo volana maromaro farany.
Omeo azy ireo, raha sanatria mahazo alalana ianareo, ny fandevenana mendrika azy. Tsy hahazo alalana ny hahafantatra ny anaran'izy ireo ianareo, mazava ho azy, fa mba iangaviana ianareo, mba aza omena niomerao kisendrasendra fotsiny izy ireo. Ampiasao ny eritreritrareo ary aleveno miaraka izy ireo. Efa naparitaka loatra ny fianakaviana Siriana, ary tsy misy te-halevina samirery.
Manana revolisiona iray ao izahay. Hozony, na hitomanio. Ao izany, ao amin'ireo vato, ao amin'ireo fasana, ao anatin'ny tany ary eny ambony amin'ny rivotra.
Indray andro nanoratra teo amin'ny rindrin'ny fasana izahay: ”Velona izahay, mbola hanohy foana, ary ho tanteraka ny nofinofy”. Alaivo daholo izay rehetra navelanay ary manofisa foana. Tsy ho ela dia halaina aminareo ny zavatra rehetra anananareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/30/112759/